I-Drexel University: Izikolo ze-SAT, Imilinganiselo yokwamkela
IYunivesithi yaseDrexel eFiladelphia ayikho isikolo esikhethiweyo, ngesilinganiso sokwamkela ama-75 ekhulwini. Ngokubanzi, abafakizicelo abaphumeleleyo baya kuba neeklasi ezizinzileyo kunye namanani okuhlolwa okulinganayo. I-website ye-adreyile ye-admissions inezo zonke iinkcukacha zesicelo, kwaye i-ofisi yokungenisa i-admission iyatholakala ukuze uphendule nayiphi na imibuzo onokuyenza. Njengengxenye yenkqubo yesicelo, abafundi abanomdla baya kufuneka bathumele kwisicelo, amanqaku avela kwi-SAT okanye UMTHETHO, ukubhaliswa kwesikolo esikolweni esiphakamileyo, iincwadi zokucebisa kunye nesampula yokubhala.
I-Drexel ye-Acceptance Rate: 75%
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT umdwebo weDrexel
ISAT Math: 560/670
UMTHETHO UMathe: 25/30
Inkcazo yeDrexel University
Efumaneka eWest Philadelphia ( jonga zonke iikholeji zendawo yaseFiladelphia ) ngqo kwiYunivesithi yasePennsylvania , iDrexel University iyabonwa kakuhle ngeenkqubo zayo zangaphambi kobugcisa kwiinkalo ezinjengezoshishino, ubunjineli kunye noonesi. Ixabiso le-Drexel lokufunda, kunye nabafundi banokuxhamla kwiinkalo ezahlukeneyo zophando lwamazwe ngamazwe, ama-internship kunye nemfundo yokubambisana. Iyunivesiti inceda ukubeka abafundi kwinethiwekhi yayo eyi-1,200 iinkampani kwiindawo ezingama-28 kunye neendawo ezingama-25 zamazwe ngamazwe.
Ngaphandle kweklasini, uDrexel uyabamba inani lamabhunga kunye nobutyebi; Kukho nezinye iiklabhu kunye nemibutho kwi-campus, ukusuka kumculo, inkonzo kunye namaqela okuzonwabisa.
IYunivesithi ijolise ekubandakanyekeni koluntu, ngeendlela ezintathu zokufunda: iiprogram zemfundo ezixhamla uluntu lwaseFiladelphia, iinkqubo zoshishino ezixhasa amashishini asekuhlaleni, kunye neeprojekthi zenkonzo kawonkewonke ezenziwa ngabafundi kunye nobuchule. Kwi-front front, iDrexel Dragons ukuncintisana kwiCandelo le-NCAA I- Colonial Athletic Association .
Ubhaliso lwabonke: 24,232 (i-15,552 izifundo zakudala)
Ukuphazamiseka kwesini: 53% Amadoda / 47% Amadoda
86% Ixesha elipheleleyo
Isifundo kunye neMali: $ 51,030
Iincwadi: i-$ 1,700 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 14,367
Ezinye iindleko: $ 4,278
Iindleko ezipheleleyo: $ 71,375
I-Drexel yaseYunivesithi yoNcedo lwezeMali (2015 - 16)
Izibonelelo: $ 29,097
Imali: $ 10,377
I-Popular Majors: I- Biology, iBusiness, Ubunjineli Bombutho, I-Computer Science, Ubunjineli Bombane, iNzululwazi Yolwazi, Ubunjineli Bamatshini, Ubunjineli
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala ( abafundi bexesha elipheleleyo ): 89%
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka engama-4: 27%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 70%
Imidlalo Yabantu: I- Lacrosse, iTennis, iBhola yeBhola, Ukulwa, Ukukhwela, iNgcahla, UkuBhukuda nokuDoba, iScash
Imidlalo yabasetyhini: I- Tennis, Ukubhukuda kunye nokuDaza, iBhola lebhola, iBockey yeHlabathi, iNgcahla, UkuHluma, iSoftball, iScash, iLacrosse
Ukuba uthanda iDrexel University, Unokuthi uthanda ezi zikolo
IDrexel University kunye neSicelo esiQheleleyo
I-Drexel isebenzisa isicelo esiqhelekileyo .
I-Admission University yase-St.
I-Northwest Missouri State University Admissions
Indlela yokudibanisa "Chaza" (ukucacisa) ngesiFrentshi
I-Wrestlers Ininzi Eyaziwayo
Isigaba Ingxabano kwiKlasi
Imbali ethi "Izwe Lami, Lolungileyo okanye Lungalunganga!"
UHoli uMthendeleko wamaHolo
Ukulungiswa kweNkqubo yokuSebenzisa iMemori yeDelphi
Phezulu uMnu Mister Iingoma zee-80s
Iiposenti ezingama-25 eziphezulu zeengoma ze-2015 ezikude